Ndabere na ụdị na akwụkwọ. Ihe anyị kwuru na otu anyị si ekwu ya. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Taa, aga m eleba anya na isiokwu n'agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa na nka niile, na akwụkwọ ọgụgụ karịa n'ihi njirimara ya: Ana m ekwu maka mmegide na mmekọrịta dị n'etiti el ego y la ụzọ.
1 Ndabere na ụdị
2 Okwu na-ekwu ihe ọ bụla
3 Na-achụ nrọ ahụ
Ndabere na ụdị
Ọ bụrụ na m chọrọ ịkọwa okwu ndị a n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa, m ga-ekwu nke ahụ el ego bụ ihe anyị na-ekwu, na ụzọ kedu ka anyị si ekwu ya. Enwere ike ijide otu echiche ahụ na ibe abụọ ma ọ bụ narị abụọ, n'otu ụzọ ahụ etu esi akọ akụkọ ga-emetụta etu anyị si were ya. Nke a dị mkpa karịsịa na akwụkwọ, karịsịa na akụkọ.
La ụzọ Ọ bụ akwụkwọ ozi mkpuchi gị n'ihu onye na - agụ ya, ihe mbụ ga - abanye ya tupu ya abanye ederede gị. Eleghara anya ụzọ Ọ dị ka iso gị na nwata nwanyị na-erikọ nri abalị n’otu ụdị uwe ị na-eyi maka ịgba ọsọ. O nwere ike ọ chọghị ịmeghachi ya, yabụ onye na-agụ gị achọghị. Enwere ọtụtụ ihe atụ nke otu ị ga-esi eleghara onwe gị anya n'akụkụ a, site na isi ihe kachasị mkpa dị ka ịmehie okwu, ma ọ bụ okwu mgbagwoju anya, gaa na ihe ndị ọzọ dị ka ịkọwa okwu ọjọọ, ụda olu, wdg. Ọ dabara nke ọma enwere ụzọ dị mma iji dozie nke a: ịgụ ọtụtụ na ihe niile. Ọbụghị naanị na ị ga - enwe ike ịmụba okwu gị ka ị ghara ịsị na ihe dị enweghị atụ, ma ọ bụrụ na ị na-agụ ndị edemede ndị ọzọ nke ọma, ị na-ahụkwa otú Arman ederede ha, ị ga-ahụ ihe kpatara ya na otu ha si ede.
Okwu na-ekwu ihe ọ bụla
Ọ bụ ezie na enweghi obi abụọ gbasara mkpa ọ dị ụzọ, nke a gbasara oke ihe egwu: ihe efu okwu syndrome. Echere m na abụ ndị ahụ dị oke mma, mana abụchaghị okwu na enweghị obi mmụọ, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ndị ahụ onye ọdee akwụkwọ yiri ka ọ na-agba mbọ mgbe niile igosi etu ọ dị site na itinye okwu otu na ibe. Otu ndụmọdụ: ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu, ekwula ya, n'ihi na n'agbanyeghị agbanyeghị amamihe gị, na n'agbanyeghị etu ilu siri dị ị jiri, onye na-agụ ya ga-emechi akwụkwọ gị n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụrụ na ị matala onwe gị na nkebi ahịrịokwu ndị a, enwela obi nkoropụ, na enwere ọgwụgwọ dị mfe: tụlee ide naanị ihe ịchọrọ ịgụ. Echiche a echebere m ọtụtụ oge site na ịdaba na akwụkwọ edemede na ide akwụkwọ, echekwara m na onye ọ bụla nwere ike iji ya kpee onwe ya ikpe. Ezi akara dị n'etiti ihe mgbagwoju anya na ederede Vulcan dị mfe ịgafe; n'agbanyeghị, n'aka nke ọzọ, atụla ụjọ ide ihe siri ike. Kwesighi ide ihe ederede na okwu ole na ole ka ndị mmadụ nwee ike ịghọta ma gụọ gị, n'agbanyeghị na ị nwere ike iji ihe ole na ole a mara mma karịa. O doro anya, okwu bara ụba, ọtụtụ nkọwa, wdg. ha na-abụkarị ihe ịrịba ama nke ezigbo akwụkwọ. Nsogbu bụ mgbe ị na-agbalị ịgafe nnu na ose a site na isi nri.
Na-achụ nrọ ahụ
Ma ego, ebe a enweghi uzo ozo di iche: ma ihe ikwuru bu ihe uto ma obu ha agaghi agu gi. Dị mfe dị ka nke ahụ. N'agbanyeghị otu ị si dee ede nke ọma, ị gaghị emeri onye ọ bụla naanị na nke ahụ. Ọ dị ịtụnanya na okwu ọzọ nwere ike ime, ebe ọ bụ na ụfọdụ ndị edemede na-amaghị nke ọma na usoro iwu, jiri echiche na ezi echiche mejupụta ya. Ma na nka abughi ihe ngopu nye ayi: na madu ole na ole gabu ndi gara nke oma aputaghi na ayi aghagh ime otua. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ma a jaa mmadụ mma maka akwụkwọ na-adịghị mma..
N'ịchịkọta, na n'ikpeazụ: kedu ihe dị mkpa, ala o ọdịdị ahụ? Ihe kacha mma, dịka ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ndụ a, bụ iburu n'uche ihe ọkà ihe ọmụma kwuru: Omume ọma dị n'etiti. Iji dee nke ọma, ị ga-enwe nguzozi n’etiti ha abụọ, ebe ọ bụ na ọ dị mfe ilekwasị anya na naanị otu. N'agbanyeghị ihe ị bụ, mụọ amụ! Ihe ị ga-ede kwesịrị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndabere na ụdị na akwụkwọ. Ihe anyị kwuru na otu anyị si ekwu ya.
Obi masịrị m etu i siri kọwaa echiche ndị a, agaghị m echezọ ya. I meela nke ọma, ị chere na m ga-aga ule m.
Medzọ ọgwụgwọ dijo
Enwere m mmasị na nkọwa dị na ndabere na ụzọ mgbe m na-ede ihe, ọ na-eme ka ọ dị mfe ma dịkwa mfe nghọta. Ọ dị ezigbo arụmọrụ.
Nkọwa mara mma enwere m obi abụọ banyere okwu a, mana ekele dịrị m doro m anya.
Writingzọ edere nghọta, ekele maka ọrụ gị, emesịrị m ghọta okwu abụọ a.
Ozi ahụ dị ụtọ, ebe ọ bụ na ịgụ akwụkwọ bụ ngwá ọrụ iji gbasaa ihe ọmụma anyị, n'ihi nke a ọdịnaya (nzụlite) na otú o si erute aka anyị ma dọta uche anyị (ụdị) bụ ihe kacha mkpa.
N'ebe ahụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgụ, na ndị na-agụ akwụkwọ anyị nwere ike ịbanye n'ime ihe anyị chọrọ ime ka anyị kwenye na / ma ọ bụ anyị dị ka ndị na-agụ akwụkwọ na-aghọta, nyochaa ma chọpụta ihe anyị chọrọ ịmepụta mgbe ịchọọ ozi ma ọ bụ nanị ịtụgharị uche na ọgụgụ.
Zaghachi Jeshua Blanco Guadalupe